Taliska Booliska Soomaaliyeed oo bandow ku soo rogay Muqdisho – Radio Muqdisho
Taliska Booliska Soomaaliyeed oo bandow ku soo rogay Muqdisho
Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa bandow ka bilaanaya Caawa Fiidkii 9:00Pm kuna eg 12-ka subaxnimo ee isniinta soo socota ku soo rogoy shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaana gabi ahaanba la joojiyay isku socodka dadka iyo gaadiidka.
Go’aankan oo uu ku dhawaaqay Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan ayaa looga gol-leeyay sugida amniga doorashada madaxweynaha iyo in lagaga hortago falalka amnidaro ee dhici kara.
“ laga bilaabo habeenka sabtida oo caawa saddex saac waxaa la xiraayaa wadooyinka magaalada, waxaana dib loo furayaa 12-ka subaxnimo ee maalinta isniinta ah,” ayuu afhayeenka Booliska ku sheegay shir jiraa’id uu qabtay.
15-ka bishan oo beri ku beegan ayaa loo madlan yahay in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashada madaxweynaha oo ay ku tartamayaan 39-musharax, inkastoo mid ka mid ah musharaxiintaas uu tanaasulay.
Ingiriiska oo Cunaqabateeyn ku soo rogay shakhsiyaad ka ag dhow Madaxweyne Putin
Goobta ay ka dhaceyso doorashada madaxweynaha oo la diyaariyay